नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २४ चैत २०७५)
बजार सारांश (२१ चैत, २०७५)
गत साता नेप्से परिसूचक २० दशमलभ ६७ अंक (१.८१ प्रतिशत) बढेर ११६५ दशमलव २० मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि चलिरहेको छ । तर, नेप्से परिसूचक २०० दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल चलिरहेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. २८ दशमलव ८२ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम बढेर रू. ४१ दशमलव २६ करोड पुगेको छ । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकले डोजी प्रवृत्तिको मैनबत्ती बनाएर बन्द भएको छ ।
2019-04-07 - 74 view(s) - abhiyan